Garsoore Dhallinyaro Ah Ee Qaban Doona Kulanka Atletico Madrid vs Barcelona Iyo Midka Loo Dhiibay Villarreal vs Real Madrid – Laacibnet.net
Garsoore Dhallinyaro Ah Ee Qaban Doona Kulanka Atletico Madrid vs Barcelona Iyo Midka Loo Dhiibay Villarreal vs Real Madrid
Jose Luis Munuera Montero ayaa loo magacaabay inuu dhexdhexaadiyo kulanka xamaasadda badan ee caawa ay iskaga hor iman doonaan Atletico Madrid iyo Barcelona ee ka dhici doona garoonka Estadio Wanda Metropolitano.
Garsoorahan 37 jirka ayaa lagu aaminay inuu kala hagi karo ciyaartoyda iyo tababareyaasha xamaasadda badan ee xakamayntoodu adag tahay, laakiin waxa caawin doona Ricardo de Burgos Bengochea oo u fadhiyi doona muuqaalka garsoor caawiyaha ee VAR, halkaasna ka siin doona tilmaamaha go’aamada xaasaasiga ah.
Atletico Madrid oo ku jirta kaalinta saddexaad ee horyaalka LaLiga, isla markaana lix dhibcood ka horreysa Barcelona oo siddeedaad ku jirta ayaa waxa kulankoodu uu yahay mid natiijadiisu saamayn badan yeelanayso, sidaas darteedna aanay garsoore Jose Luis Munuera Montero ugu sahlanaan doonin inuu si fudud u dhexdhexaadin karo.
Kooxda tababare Diego Simeone ayaa u halgamaysa inay guusha hesho, taasina waxay dhibaato ku noqonaysaa Barcelona oo laga horreyn doono sagaal dhibcood, sidaa darteed Ronald Koeman iyo xiddigihiisa ayaa nafta dul-dhigi doona guul ay ka keenaan Wanda Metropolitano.
Garsoore Jose Luis Munuera Montero oo siddeed kulan soo dhex-dhexaadiyey xili ciyaareedkan ayaa waxa uu bixiyey 12 kaadh oo digniin ah iyo hal casaanah.
Ciyaarta kale ee xiisaha leh ee Real Madrid ay martida u tahay Villarreal ayaa waxa iyadana loo doortay inuu qabto Alejandro Hernandez Hernandez oo kulamo waaweyn oo kale hore usoo dhexdhexaadiyey, waxaana lagu ladhay Guillermo Cuadra Fernandez oo isaguna garsooraha VAR ah.